Way2News အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - APKTom
ဒေါင်းလုပ် XAPK（10.5MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Way2News - Short News App, Local News
Way2News သည်အိန္ဒိယ၏နံပါတ် 1 hyperlocal infotainment app ဖြစ်ပြီးဒေသဆိုင်ရာမွမ်းမံမှုများသည်ဒေသန္တရဘာသာစကားများဖြင့်ဒေသန္တရဘာသာစကားများဖြင့်ဒေသဆိုင်ရာမွမ်းမံချက်များကိုပေးသောပုံစံများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို Creore Indians5ခုကယုံကြည်ပြီးအိန္ဒိယအက်ပ်တစ်ခုဂုဏ်ယူစွာဖြင့်ယုံကြည်သည်။
Hindi, Marathi, ဘင်္ဂါလီ, တမီးလ်, ဂန္ဒင်, ဂန္ထရက်
မင်းပတ်0န်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေနဲ့မွမ်းမံချင်တာလား။
မင်းကိုလူကြိုက်များတဲ့အရေးကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့သင့်ကိုပံ့ပိုးပေးတယ်။ သင့်ကို enter ည့်ခံရန်ကျယ်ပြန့်စွာပြုလုပ်ရန်နှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလက်ရှိအဖြစ်အပျက်များနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်နေရန်ကူညီရန်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။
app တွင်အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များ -
device များအားလုံးအတွက်သင်နောက်ဆုံးပေါ်အလုပ်သတိပေးချက်များဖြင့်ရရှိနိုင်သည့် DIRMART MODAR အတွက်ဖတ်ရှုခြင်း, သင်နှင့်မည်သည့်အကြောင်းအရာများအရေးအကြီးဆုံးကိုရွေးချယ်ပါ။
Live Cricket မွမ်းမံမှုများ -
Live Updates နှင့် Highlights တို့ဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ပုကနေလက်ရှိလ်တာများနှင့်နောက်ဆုံးပေါ် Live Matches အတွက်အသိပေးချက်များကိုရယူပါ, လာမည့်ပွဲများနှင့်သီးသန့်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများအတွက်ဇယားကိုရယူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်
ICC ခရစ်ကက်ကမ္ဘာ့ဖလား, T20 World Cup, IPL, IPL, FIFA, အိုလံပစ်နှင့်စသည်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖုံးလွှမ်းထားသည်။
အလုပ်တစ်ခုရှာနေတာလား ဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်သူတို့အားလုံးသင့်အတွက်ဖုံးအုပ်ထားတယ်။ နောက်ဆုံးအခြေအနေ, ဒေသဆိုင်ရာအလုပ်များနှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ jobers အလုပ်အကိုင်များ, အချိန်ပိုင်းအလုပ်များနှင့်လတ်ဆတ်သောအလုပ်များနှင့်လတ်ဆတ်သောအလုပ်များဖွင့်လှစ်ခြင်းများအပါအ0င်နောက်ဆုံးအခြေအနေဆိုင်ရာသတိပေးချက်များ, 10 ကြိမ်မြောက် Pass Jobs, UG Jobs, ဒီပလိုမာဂျော့ဘ်, ဒီပလိုမာဂျော့ဘ်စသည်ဖြင့်အထူးအမျိုးအစားတစ်ခုရှိတယ်။
ရုပ်ရှင်ရုံမွမ်းမံမှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ app တွင်သီးသန့်နာမည်ကျော်နာမည်ကြီးအတင်းအဖျင်းအားဖြင့်လှည့်ကြည့်ပါ။ လာမည့်ရုပ်ရှင်များ, ရုပ်ရှင်ရုံထုတ်လွှတ်ခြင်းများ, ဝက်ဘ်ဆိုက်များ, ဝက်ဘ်ဆိုက်များ, Tollywood, Kollywood, Mollywood,
ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးကိုရှင်းလင်းစွာထိုးထွင်းသိမြင်စေရန်သင်၏နေ့စဉ်ဒီဂျစ်တယ်မဂ္ဂဇင်းများကိုရယူပါ။ ကျန်းမာရေး, မော်တော်ကား, စီးပွားရေး, ဖျော်ဖြေရေး, ဖျော်ဖြေရေး, အားကစား, ဖက်ရှင်မှလူနေမှုပုံစံစသည့်, နည်းပညာ, ခရီးသွားခြင်းနှင့်စသည်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျယ်ပြန့်သောအကြောင်းအရာများကိုလွှမ်းခြုံထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာများကိုဖတ်ရန်နှင့်နားလည်ရန်လွယ်ကူသည်။
Daily Horoscopes & Asteology
သင်၏နေ့စဉ် horoscope ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ, အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း, မိသားစု, စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့်အခြားအရာများပါ0င်သည်။ နေ့စဉ်နက္ခတ်ဗေဒင်သည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးသင့်အတွက်နေ့သည်မည်သည့်နေ့ရက်များသိုလှောင်ထားသနည်း။
သင်၏အကျိုးစီးပွားအပေါ် အခြေခံ. မျှဝေထားသောနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဗိုင်းရပ်စ်များကိုရှာဖွေပါ။ သင်၏အချိန်ကိုကယ်တင်ရန်အက်ပ်တွင်ဗီဒီယိုတိုတိုများကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
24 *7နေ့စဉ်ဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူမွမ်းမံပါ ပြည်နယ်, ခရိုင်, Mandal နှင့်ကျေးရွာ။ သင်၏အကြောင်းအရာကိုလည်း မျှဝေ. ပုံပြင်များတိုတောင်းနိုင်သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင်ဒေလီ, Uttar Pradesh, Maharashtra, ဗလဂါသာ, , Karnataka, Madhya Pradesh, Haryana, ပန်ဂျပ်, Harya, Kerala, Tamil Nadu, Pondichary, Ponbalhara, Tribura, arunachal pradesarh, arunachal pradisgarh, arunachal pradhara,
ကျွန်တော်တို့ကို Creore Indians & Crore & Concians မှယုံကြည်စိတ်ချရပါတယ်။
ယခု app ကို download လုပ်ပြီးစိတ်0င်စားဖွယ်ကောင်းသောပုံပြင်များကိုဘယ်တော့မှအရင်ကမတူဖူးပါ။
ဘာအသစ်လဲ Way2News - Short News App, Local News 7.85